Barbarooniga oo Kaalin Wanaagsan Ka Qaata Kulanka Sariirta | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Barbarooniga oo Kaalin Wanaagsan Ka Qaata Kulanka Sariirta
Barbarooniga oo Kaalin Wanaagsan Ka Qaata Kulanka Sariirta
Thursday, July 27, 2017 Bulshada
Bulsha:- Barbarooniga waxa uu ka mid yahay khudaarta inta badan dadka ay aadka u jecelyihiin gaar ahaan Soomaalida aad bay u isticmaashaa xiliyada ay karsanayaan cunada. balse kuma baraarugsano in wax badan uu kusoo kordhiyo jirka aadmiga gaar ahaan ragga iyo Dumarka.
Ragga inta badan xiliyada ay socoto ciyaarta sariirta waxa ay u kala baxaan kuwa ku daaha ciyaarta iyo kuwa wareega hore ku hara waxaana la ogaaday in dhibtaada ay tahay xanuuno xiligaasi jira iyo qofka oo aanan ku qanacsaneen in uu sii saarnaado sariirta, si kastaba ha ahaatee Barbarooniga ayaa la ogaaday in wax badan uu ka taro biya daaha ama in ay bataan biyaha oo xiisaha iyo ciyaarta sariirta ay noqoto mid aan dhamaan oo la macaansado.
Baaritaan la sameeyay ayaa waxa aylagu soo ogaaday qoysaska Soomaalida ee inta badan isticmaala barbarooniga ay badanyihiin ayagoon ka warheyn waxa uu taro balse isaga darsada cunada oo qur’ taa oo ugu danbeyntii nagu kaliftay in aan soo bandhigno faa’ida iyo wax tarka gaar ahaan uu u leeyahay ragga barbarooniga.
Kaliya biyaha ma badiyo ee waxa uu kobciyaa awooda iyo in xiisaha sariirta in uu sii ahaado mid aan lagu kala bixin xili hore waana faa’ida uu ilaahay barbarooniga ku dhax abuuray.
Inta badan barbarooniga waxaa laga helaa goobaha lagu gado khudaarta waxaana sameyn kartaa adigoon karin ayaad ku cuni kartaa ceyriinka wax dhib ah kuguma uu abuurayo hadii maalin kasta aad ka isticmaasho wajbad ama garaam dhan 1/2 ama qiyaas ahaan 5-xabo waxaan kuu balanqaadayaa in wax badan ay iskaa badali doonaan dhanka ciyaarta sariirta oo aad noqon doonto mid awood u leh in wax badan in uu sii safto ama biyo badan uu ku maansheeyo nawaaxiga bahalka xaaska.